Maraoka: Vohikala Miaritra Fisomparana DDoS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2011 5:00 GMT
Niaritra fisomparana “distributed denial-of-service” (DDoS) na “tolotra voatsinjara nolavina” ny vohikalam-pitolomana maraokana Mamfakinch! ny andron'ny alahady 31 jolay 2011, ka nampikatso nandritra ny ora maromaro ny fidirana tao aminy. Efa miverina an-tserasera ankehitriny ny vohikala.
Inona moa ny Mamfakinch! ary inona no antony fanafihana?
Teo am-piandohan'ny revolisiona Arabo dia nisy mpikatroka an-tserasera Maraokana roa nanokatra ny vohikala tamin'ny 17 Febroary 2011 ary nnatsoiny hoe Mamfakinch!, izay midika amin'ny teny Arabo Maraokana hoe “Tsy hitsahatra izahay!”.
Nandritra ny enimbolana nisiany dia nahazo mpitsidika manokana mihoatra ny iray tapitrisa amin'ny alalan'ny rantsana vaventy roa ao aminy ny Mamfakinch! ka tafiditra amin'izany ny vavahadim-baovao sy ny bolongana. Ny tanjon'ny vohikala, araka ny nolazain'ny mpikambana ao aminy, dia ny hanolotra sehatra ahafahana miteny malalaka ho an'ny mpanohitra sy ny mpanohana ny demokrasia.
Ho fanoherany ny fitontongan'ny revolisiona arabo dia miezaka ny manangona, manadio ary mampiely ny fitaovan-tseraseran'olo-tsotra ny Mamfakinch! mampivoatra ny asan'ny mitovy karazana aminy ao amin'ny faritra, indrindra fa amin'ilay seha-baovao malaza Toniziana Nawaat.org.
Saingy araka ny itomboan'ny isan'ny mpamaky ny Mamfakinch! ihany koa no mahamaro ny isan'ny mpanenjika azy. “Nitombo ny lazan'ny vohikala eo amin'ny tontolom-bolongana maraokana saingy nihamaro ihany koa ny fahavalony. Efa hatrany am-piandohana no nisy ny nisompasompatra ny vohikala saingy mihamasiaka mihitsy ny fisomparana ankehitriny” hoy ity mpiara-manorina ny vohikala iray izay nanazava ihany koa fa mahazo fandrahoanana sy famoahan-kevitra somary manohintohina tsy voaisa intsony isan'andro isan'andro ny seha-tserasera. [Mariho azafady fa tsy tian'ny mpisolo tena ny Mamfakinch! anaovana ny tafatafa ny ilazana ny anarany].
Misy lahatsary iray moa tamin'ny aterineto nihambo ho nisompatra ny Mamfakinch!. Namoaka lahatsoratra [Fr] haingana dia haingana (izay feno fanesoana) ny vohikala ho fanitsiana ny filazana fa nisy fisomparana tahaka ny “fakana tahaka fadiranovana”.
Io alahady io, raha mbola eo ampikarakarana ny fiarovana ny fitantarana mivantana ny diabe sy ny fihetsiketsehan'ny mpanohana demokrasia manerana ny fanjakana ny vohikala dia tsy mety nidirana ny vavahadibeny. Naharitra ora maromaro ny fikatsoana mandrapahamaizin-kitroka ny andro.
Araka ny nolazain'ireo mpitantana dia tratran'ny DDoS ny Mamfakinch!. “Tarataratra fa niainga avy amin'ny adiresy IP miovaova refy an'arivony avy any Arabia Saodita ny fisomparana (!)” hoy ny webmaster-n'ny vohikala. “Reraka” tao anatin'ny ora vitsivitsy ny server-n'ny vohikala noho ny hamaroan'ny IP voabaiko “te-hanokatra” azy.
“Efa miverina amin'ny laoniny ankehitriny ny vohikala ary efa nandray fepetra izahay mba tsy hisy intsony ny tranga toy iny amin'ny manaraka… na dia tsy misy aza ny afa-matoky tena tanteraka” hoy ity mpiara-manorina ny vohikala izay nanampy ny nolazain'ny mpiara-miasa aminy izay “noho ny antony ara-piarovana mivandravandra dia nisafidy ny tsy hamoaka ny antsipirian'ny fomba iarovana ny fidirana amin'ny vohikala.”
Tahaka an'i Ben Ali any Tonizia
Talohan'ny revolisiona tany Tonizia dia nankalazaina tamin'ny karazana fahafahana nogohan'ny mpisera aterineto i Maraoka. Saingy vaky moa ankehitriny ny fisomparana ireo mpisintaka an-tserasera, izay maro amin'izy ireo no mahita ny kaonty Facebook na mailaka azy ireo voajirika. Nampiasaina angamba ny teknikam-pamandrihana nahazoana ny tenimiafina.
Andavanandrom-piainana nandritra ny fitondran'i Ben Ali tany Tonizia manko ny fisomparana amin'ny alalan'ny DDoS ny teknikam-pitsirihana hatrany anatiny ary ny fanakanana ny DNS an'ny mpisintaka. Mihamahazo vahana any Maraoka manko ireo trangan-javatra ireo. Mbola tsy tafarina tamin'ny fisomparana nahazo azy efa iray volana izao manko ny gazetiboky tsy mpanaja Demain Online. Ny vohikala inoana ho mpanohana ny demokrasia any Maraoka 20Fevrier.com ihany koa dia niharan'ny fisomparana herinandro maromaro izay. Tsy tafiditra an-tserasera intsony izy io nanomboka tamin'izany.
“Araka ny isomparany anay no hahazoanay fianarana!”
Ny mpikatroka zatra ady any amin'ny tontolo arabo matetika dia ireo avy amin'ny tontolo nanjakan'ny tsindrihazolena. Rehefa nifanandrina nandritra ny fotoana maharitra tamin'ny fitondrana tao aminy ny mpikatroka Toniziana sy Ejipsiana dia lasa manampahaizana manokana amin'ny fampiasana fitaovana enti-miodina (ny sakatsakana). Naondrany amin'ny firenenkafa any amin'ny faritra izay ahitana mpikatroka mianatra isan'andro noho ny tolony iadiana amin'ny sivana an-tserasera moa izany fahazaina manokana izany.
Ity fanambarana avy amin'ny mpikambana ao amin'ny Mamfakinch! ity no mamehy tsara ny toe-draharaha: “Araka ny isomparany anay no hahazoanay fianarana! Avelao ho avy izay ho avy!”